Ogaden News Agency (ONA) – Burundi oo Xidhaysa Xafiiska Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay.
Burundi oo Xidhaysa Xafiiska Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay.
Posted by Dayr	/ December 7, 2018
Dawladda Burundi ayaa amartay in guddiga xuquuqda aadanaha ee Qaramadama Midoobay (QM) uu xafiisyadiisa albaabada isugu laabo muddo labo toddobaad ah, sida ilo ka tirsan QM ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP.
Burundi ayaa isaga baxday shirkii Urur goboleedka Bariga Afrika ee bishii November la qabtay, kaas oo la rabay in diiradda lagu saaro qaska ka taagan dalka Burundi. Sannadkii 2017 Burundi ayaa isaga baxday Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC.
Rabshado ayaa dalkaas ka billawday sannadkii 2015-kii markaas oo madaxweyne Pierre Nkurunziza uu u tartamayay markii saddexaad xilka madaxtinimada. Daganaansho la’aantii siyaasadeed ayaa horseeday boqolaal dhimasho ah, in kabadan 400,000 ruuxna dalka ayay isaga qaxeen, sida ay QM sheegtay.